विचारको विनिर्माण | Martech Zone
सयौं बर्षको लागि, परिभाषा उत्पादक आवश्यक छ कि त्यहाँ उत्पादन लाइन कच्चा मालबाट बजारका लागि सामानहरू लिनको लागि एक उत्पादन लिईन्छ। धनलाई टन र फुटेज र इन्भेन्टरीमा मापन गरियो। कति जनाको आधारमा बैंकहरूले पैसा edण लिए सम्पत्तिहरू तपाईसंग भएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा युवाहरूलाई समयमै देखा पर्न, एउटा काम गर्न लाइनमा लाग्न, र कामदारहरू विभाजित भयो ... निलो रंगले उनीहरूको हात मैला र सेतो कलरको सुपरिवेक्षणमा ल्यायो।
हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले विलाप गर्छन् कि हामीले निर्माण कार्यहरू हरायौं ... कि तिनीहरू सस्तो श्रम र कुनै नियमन बिना विदेश गएका छन्। तिनीहरूलाई फर्काउनको लागि तिनीहरू सबै घोप्टो परिरहेका छन्। कसलाई फिर्ता ल्याउने? हाम्रो बच्चाहरु यस ग्रह मा सबै भन्दा राम्रो शिक्षा को वित्त पोषण पछि debtण मा गहिरो छ। तिनीहरू सीधा बेरोजगारी मा स्नातक छन्। व्यवसायहरूले काममा लिइरहेका छैनन् ... तिनीहरू अझै पनि मान्छेहरू बिछाउदै छन्।
सामानको निर्माण फिर्ता हुँदैन। त्यो सत्य वास्तविकतामा परिणत भए पनि हाम्रा बैंकहरू, हाम्रा नेताहरू, र हाम्रो प्रणालीले उनीहरूले कति विजेटहरू दिन्छन् र ती विजेटहरूको मागको आधारमा सफलताको न्याय गर्दछन्। यो मोबाइल फोन वा कोडका लाइनहरू, उत्पादकता अझै पनि उत्पादनको बन्द आधारित छ। तर उत्पादन उत्पादन अब हामी के महान छौं के छैन, न त हामी यो हाम्रो देशको धनको अभावमा गर्न सक्दछौं।
समसामयिक रूपमा, डिजिटल मिडियाको आगमनको साथ, हामी नयाँ बजार साक्षीरहेका छौं। विचारहरूको बजार। सस्तो कम्प्युटि and र कनेक्टिविटीले हामीलाई ती विचारहरू ढुवानी गर्न राजमार्गहरू सिर्जना गरेको छ। मा DK New Media, हामी जहाँसम्म स्विट्जरल्याण्ड, रोमानिया मा डिजाइनर, भारत मा अनुसन्धानकर्ताहरु को ग्राहकहरु र हामी विचारहरु निर्माण गर्दैछौं यहाँ अमेरिका मा। हामीले अडि ,को कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको एक अद्वितीय र उत्पादित साधन विकास गरेका छौं, हाम्रा ग्राहकहरूको साथसाथै इनबाउन्ड सफलता।
हामी सोच्न को लागी गर्छौं विचार एक कदम को रूप मा एक उत्पादन को अग्रणी। त्यो सबै मामलामा हुनु आवश्यक पर्दैन। विचार गर्न सक्छन् be उत्पादन। त्यहाँ हाम्रो धेरै ग्राहकहरु सहित धेरै कम्पनीहरू छन्, जुन हाम्रो विचारहरूमा लगानी गर्दछ। अवश्य पनि, त्यहाँ सँधै एउटा बाँच्ने योग्य छ कि ती साथ आउँछ ... अडिट, इन्फोग्राफिक्स, विश्लेषण, ब्लग पोष्टहरू। तर धेरै पटक, यो केवल एक विचार हो। र जब हामी यो धारणा लिन र यसलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन्छौं, यो व्यवसायिक परिणाम हो जुन लगानीको लागि योग्य थियो।
हाम्रो उत्पादन लाइन भरिएको छ, र माग बढ्दो छ। समस्या, अवश्य पनि यो हो कि प्रणालीले मागलाई वा उत्पादनलाई चिन्न सक्दैन। प्रणाली अझै पनी यसलाई कल गर्दछ सेवा। प्रणाली अझै पनी विश्वास गर्दछ कि यदि म मेरो व्यापार बढाउन चाहान्छु, कि त्यसो गर्ने एक मात्र साधन भनेको मेरो कर्मचारीहरूको संख्या बढाउनु हो। निर्माणको लागि कुनै loansण छैन विचार, निर्माणको लागि कुनै लगानी फर्महरू छैनन् विचार, र ती परिणामहरू मा मान्यता छैन जुन ती द्वारा उत्पन्न गरिएको थियो विचार.
यो गुनासो होईन, यो अवलोकन हो र कार्यको लागि कल हो। यी सबै वर्षहरुमा हामीले सिलिकन भ्याली र सबै विश्वविद्यालयमा लगानी गर्दै आएका थियौं यस समयको लागि हामीलाई तयार गर्नु थियो ... र हामीले त्यसलाई उडाइरहेका छौं। हामी हाम्रा बच्चाहरूका दिमागलाई उत्तम शिक्षाका साथ प्याक गर्दैछौं तर उनीहरूमा उनीहरूको विचारहरू लिनको लागि प्रेरणा र स्रोतहरूको कमी छ।
यो गर्नको लागि उत्तम समय छैन। हामीसँग एक वैश्विक अर्थव्यवस्था छ जहाँ हामी अविश्वसनीय दक्षताका साथ आफ्ना विचारहरू निर्माण गर्न सक्दछौं ... विश्वको हरेक कुनाबाट संसाधनहरू जम्मा गर्ने, इन्टरनेट मार्फत नि: शुल्क र सस्तो उपकरणहरूको प्रयोगलाई हाम्रो निर्माण गर्न। उत्पादन लाइनहरु, र हाम्रो विचारहरू मार्केटमा बेच्न डेलिभर गर्नुहोस् ... महिनाहरू वा बर्षहरूमा होइन ... तर घण्टा र दिनमा।
धेरैले सोच्न मानिसहरूलाई दोषी ठहराउँनेछन् कि करीव million० करोड मानिस बेरोजगार छन्, यो सबैभन्दा खराब समय हो अफशोर रोजगार यो खराब समय होइन, यो उत्तम समय हो। यदि तपाइँ तपाइँको विचार लिन सक्नुहुन्छ, यसलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई किनारका श्रोतहरूसँग डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई मार्केटमा लिन सक्नुहुनेछ र यसलाई छिटो र सस्तोमा बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं यसलाई बेच्न सक्नुहुनेछ, तपाईं त्यसपछि त्यो राजस्व पुन: निवेश गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको व्यवसाय बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो बृद्धिले हामीलाई यहाँ इण्डियानापोलिसमा सम्पूर्ण टोली भाडामा लिन सक्षम बनायो।
केही हप्तामा, हामी एक सामग्री प्रणालीको साथ प्रत्यक्ष जाँदैछौं जसले हामीलाई हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई विश्वभर १ 160० भन्दा बढी संसाधनहरूमा जडान गर्न अनुमति दिनेछ। हाम्रो टीमले कार्यप्रवाह निर्माण गर्दछ, टोलीहरू भेला गर्दछ, क्युरेट, र यस मार्फत विकास भएको सामग्री प्रकाशित गर्दछ। अन्तिम परिणाम उच्च गुणवत्ताको उत्पादन छिटो र सस्तोमा बनाइएको हो। हामी हाम्रो निर्माण लाइनहरु निर्माण गर्दैछौं!
राजनीतिक शक्तिहरू, वित्तीय शक्तिहरू र व्यापारिक शक्तिको लागि हाम्रो सामु अवसरहरू पहिचान गर्ने समय आइसकेको छ। यो समय हाम्रो शिक्षा प्रणालीको लागि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा र शिक्षित तुल्याउने हो - केवल कसरी सोच्ने बारेमा मात्र होइन, तर तिनीहरूको विचारहरू कसरी मार्केटमा ल्याउने भनेर। विचारहरूको लागि बजारको सीमा छैन, यो त्यहाँ भएको सब भन्दा ठूलो बजार हो।
हामीले यस बजारको लागि उपकरणहरू सुधार गर्न जारी राख्नुपर्दछ, सूचना सुपरहाइवेमा पूर्ण रूपमा उपयोग गरीरहेको छ जुन अधिक सामाजिक, सहकार्य, कार्यप्रवाह र टीम वर्क उपकरणहरू जुन विश्वमा फैलिएको छ। हामीले उत्साह र प्रेरणाको आवश्यकता छ विचार बजार। हामीले आईडिया मार्केटमा लगानी गर्नु पर्छ। विनिर्माण उद्योगमा जानु भन्दा अहिले राम्रो समय छैन ... विचारहरूको निर्माण।